बिहीबार खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्दै, कुन–कुन राशीले हेर्न मिल्छ ? – US Nepal News
बिहीबार खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्दै, कुन–कुन राशीले हेर्न मिल्छ ?
- यूस नेपाल न्युज संवाददाता प्रकाशित मिति: December 23, 2019
काठमाडौं । यही पुस १० गते बिहीबार पौष कृष्ण औँसीका दिन बिहान खण्डग्रास (आधा ढाक्ने) सूर्यग्रहण लाग्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । ग्रहणले बिहान ८ः४२ मा स्पर्श गर्ने समितिका अध्यक्ष प्राडा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए । पश्चिम र नैऋत्य कोणको बीचबाट बिहान ग्रहण शुरु हुनेछ । बिहान १०ः०१ बजे मध्य हुने ग्रहण ११ः३१ बजे समाप्त हुनेछ । पूर्व र आग्नेय कोणको बीचबाट ग्रहण समाप्त हुने समितिले जनाएको छ ।
बिदा छैन : गृहमन्त्रालय
यसअघिका सूर्यग्रहणका बेला सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने गरेको थियो । यसपटक भने क्यालेन्डर (वार्षिक पात्रो) मा बिदा उल्लेख नगरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले राससलाई जानकारी दिए । क्यालेण्डरमा बिदा नभएको बेलामा सरकारले निर्णय गरेर बिदा दिने गरेकामा हालसम्म सूर्यग्रहणका लागि पुस १० गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय नभएको उनले बताए ।
ग्रहण बार्नेका लागि बिहान १० बजे कार्यालय पुग्न अप्ठ्यारो हुने भएकाले बिदा दिए सहज हुने मागसमेत गरिएको छ । बिहान साढे ११ बजेसम्म भोजनसमेत नगर्नेका लागि असहज हुने मैतीदेवीका नारायणप्रसाद घिमिरेले गुनासो गरे ।
युवा लक्ष्यित कार्यक्रमसहित एक करोडभन्दा बढीको अनुदान
घर हाम्रो नेपाल	 February 11, 2015
आजको राशिफल : मंसिर १४ गते । शनिबार । नोभेम्बर ३० तारिख
यूस नेपाल न्युज संवाददाता	 November 29, 2019
भारतलाई हराउँदै पाकिस्तानले जित्यो च्याम्पियन्स ट्रफी
यूस नेपाल न्युज	 June 18, 2017